သစ်ထူးလွင် သတင်းစုစည်းမှု (၆-၂) ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ကျောင်းသားတိုက်ပွဲ ဘယ်ကို ဆက်သွားမလဲ
White-Card ကိုင်သူ မဲပေးခွင့် ကိစ္စ ဖွဲ့စည်းပုံခုံရုံး ညွှန်းမည်
ထိုင်ဝမ် လေယာဉ် အင်ဂျင် ပါဝါကြောင့် ပျက်ကျရ
အစိုးရထုတ်ပြန်ချက် သပိတ်ဖြိုခွင်းရန် ဆင်ခြေဟု ကျောင်းသားတုံ့ပြန်
ပြည်တွင်းစက်သုံးဆီ ဈေးနှုန်းများ သုံးလကျော် ကာလအထိ ဆက်လက်ကျဆင်းနေ
မြောက်ကိုရီးယား အပြောင်းအလဲ ကန်တာဝန်ရှိသူ မြန်မာကို နမူနာပြ
တော်လှန်ရေးသတင်းသမားတဦးရဲ့ ဒုိုင်ယာရီ (၄၄)
(၅၃)အထူးယာဉ်တိုက်မှု (၂)ဦးသေ၊ (၁)ဦးဒဏ်ရာရ
(၁၆) မိုင် စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် မြွေများ ဖမ်းဆီးရမိ
အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေ ဆက်လက်တိုက်ခိုက်
တိုက်ပွဲကြောင့် ရွာသားများ သေဆုံးဒဏ်ရာရ၊၂၀၀၀ ကျော် ထွက်ပြေး
Father Land ဦးကျော်မြင့်အား (စ.စ.စ) စသုံးလုံးမှ တရားလိုလုပ်၍ နိုင်ငံတော်အဆင့်အဖြစ် တရားစွဲမည်
အယ်လ်ကိုင်ဒါ အဖွဲ့အား ဆော်ဒီအာရေဗျ တော်ဝင်မိသားစု က ငွေကြေး ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်ဟု အကျဉ်းသားတစ်ဦး ပြောကြား
ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းသာ သပိတ်မှောက်ရန် ၀န်ကြီး ၂ ဦး ကျောင်းသားများကို ညှိနှိုင်း
ဆန္ဒပြကျောင်းသားများ ချီတက် လမ်းကြောင်းမှာ ရဲအင်အား ၂၀၀ လောက် ချထား
အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှာ ကို ကျောင်းသားတွေ စိုးရိမ်
မုံရွာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သပိတ်စစ်ကြောင်း စတင်
ထားဝယ်နှင့်မော်လမြိုင် ကျောင်းသားများ ပူးပေါင်းပြီး ရန်ကုန်ချီတက်မည်
တက္ကသိုလ်နှင့်အခြေခံပညာစာမေးပွဲများ မပျက်မကွက် စစ်ဆေးမည်
မီဒီယာစိန်ခေါ်မှုအသစ် – မိုးအေး
ဂျော်ဒန် IS ကို လေကြောင်း တိုက်ခိုက်
ကုလတာဝန်ရှိသူ ကချင်အရေး အထူးစိုးရိမ်
ကလေးလုပ်သား ရာနဲ့ချီ အိန္ဒိယ ကယ်တင်
Posted: 06 Feb 2015 07:16 AM PST
အားလုံးသိကြပြီး ဖြစ်တဲ့အတိုင်း ကျောင်းသားတွေ တောင်းဆိုချက်အရ ကျင်းပတဲ့ အစိုးရ၊ လွှတ်တော်၊ ကျောင်းသား နဲ့ NNER ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ယက်တို့ ပါဝင်တဲ့ နေပြည်တော်က လေးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ပျက်ပြားသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အပြီးတိုင် ပျက်သွားတာမျိုး မဟုတ်ပဲ လာမယ့် ပြည်ထောင်စုနေ့ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၂ ရက်နောက်ပိုင်းကျမှ ဆွေးနွေးပွဲတွေ ပြန်စနိုင်မယ်လို့ အစိုးရဘက်က ကြေငြာထားပါတ
Posted: 06 Feb 2015 07:12 AM PST
ယာယီ သက်သေခံလက်မှတ် White Card ကိုင်ဆောင်သူတွေ ကို ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ မဲပေးခွင့်ရှိတယ်လို့ သမ္မတ နဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အပေါ် အငြင်းပွားမှုတွေ ဆက်ရှိနေပါတယ်။ အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၂၈ ဦးက ဒီကနေ့မှာပဲ ဒီကိစ္စကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနဲ့ မကိုက်ညီလို့ အခြေခံ ဥပဒေခုံရုံးကို အမျိုးသားလွှတ်တော် က တဆင့် ဖြေရှင်းပေးဖို့ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ အဖြူရောင်ကတ် ကို
Posted: 06 Feb 2015 06:07 AM PST
အင်ဂျင် နှိုးလို့ မရခဲ့ဘူးလို့ ဆို ထိုင်ဝမ်မှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပျက်ကျ သွားခဲ့တဲ့ ထရန်စ် အေးရှား လေကြောင်းပိုင် လေယာဉ်ဟာ အင်ဂျင် နှစ်ခုလုံးကို သွားတဲ့ လျှပ်စစ် ပါဝါ ပြတ်တောက် သွားတာကြောင့် ပျက်ကျ ခဲ့ရတာလို့ လေယာဉ် ပျံသန်းမှု မှတ်တမ်း Black box ရဲ့ အချက်အလက်တွေက ဖော်ပြကြောင်း စုံစမ်း စစ်ဆေးသူတွေက ပြောပါတယ်။ ပျံသန်းမှု မှတ်တမ်း အချက်အလက် တွေအရ အင်ဂျင် ၂ လုံးအနက် တစ်လုံးကို ပိတ်ပြီး ပြန်နှိုးဖို့ြ
Posted: 06 Feb 2015 02:12 AM PST
ကျောင်းသားလူငယ်တွေကို အသုံးချပြီး ဆူပူမှုတွေဖြစ်အောင် နောက်ကွယ်ကနေ ဖန်တီးနေကြတယ်လို့ အစိုးရရဲ့ ကြေညာချက်ဟာ ကျောင်းသားထုကို စော်ကားတာဖြစ်ပြီး သပိတ်ကိုဖြိုခွင်းဖို့ ဆင်ခြေဖြစ်တယ်လို့ သပိတ်စစ်ကြောင်းက တုန့်ပြန်ပါတယ်။ မနေ့ညက အစိုးရသတင်းထုတ်ပြန်ရာမှာ ပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စကို အကြောင်းပြုပြီး ဆူပူမှု များ ဖြစ်ပေါ်လာစေဖို့အတွက် ကျောင်းသားအမည်ခံသူတွေ၊ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင် ဆောင်ရွက်နေသူတွေ၊ အားပေးအားမြှောက်ြ
Posted: 06 Feb 2015 01:42 AM PST
ရန်ကုန် ၊ ၆-၂-၂ဝ၁၅ ကမ္ဘာ့ ရေနံစိမ်းဈေး ပြောင်းလဲမှုကို အခြေခံ၍ ပြည်တွင်း စက်သုံးဆီ ဈေးနှုန်း သည်လည်း သုံးလကျော် ကာလအထိ ဈေးနှုန်းများ ဆက်လက် ကျဆင်းလျက် ရှိကြောင်း စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင် များမှ သိရသည်။ ကမ္ဘာ့ ရေနံစိမ်း ဈေးကွက်တွင် လွန်ခဲ့သည့် သုံးလကျော်က ရေနံစိမ်း တစ်စည်လျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ဝဝ ခန့်ရှိခဲ့ရာမှ ယခုအခါ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၅ဝ အောက်အထိ ကျဆင်းလာခဲ့ပြီး ပြည်တွင်း ဈေးကွက် တွင်လည်း စက်သုံး
Posted: 06 Feb 2015 01:37 AM PST
စစ်အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်ကနေ ဒီမိုကရေစီ အပြောင်းအလဲ ဖေါ်ဆောင်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဥပမာပေးပြီး မြောက်ကိုရီးယား အနေနဲ့ စံနမူနာ ယူသင့်ကြောင်း အမေရိကန် ထိပ်တန်း သံတမန် တဦးက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ဖို့ ဆိုတဲ့ နေရာမှာ အစိုးရတရပ်လုံးကို ပြောင်းပစ်လိုက်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး ဆိုပြီးတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဥပမာပေး ပြောဆိုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို ဦးစံမိုးဝေ က ပြောပြ
Posted: 06 Feb 2015 01:14 AM PST
နေမ၀င်အရပ်ဆီ ခရီးသွားခြင်း DVB က ၀န်ထမ်းတွေအပါဝင် နော်ဝေးရောက်မြန်မာအတော်များများဟာ ထုိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ဆီ (အခုဆုို ရန်ကုန် အထိ) မကြာခဏပြန်လည်လေ့ရှိပေမယ့် နော်ဝေးနုိုင်ငံအတွင်း၊ အထူးသဖြင့် နေမ၀င်အလှနဲ့ နာမည်ကြီးလှတဲ့ နော်ဝေးမြောက်ပုိုင်းဆီ သွားရောက်လည်ပတ်သူ အတော်နည်းပါတယ်။ (နော်ဝေးမြောက်ပုိုင်းရှိ Tromsø မြို့မှ နာမည်ကြီးတံတားနဲ့ ဘုရားကျောင်း) ဓာတ်ပုံ- wikipedia. ဈေးကြီးလွန်းတောင်ကြော
Posted: 06 Feb 2015 01:05 AM PST
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၆ ၅.၂.၂၀၁၅ ရက်နေ့ ၀၅၃၀ အချိန်တွင် မှော်ဘီမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း အတိုင်း မြောက်မှတောင်သို့ မောင်းနှင်လာသော 1C ---- FUSO BUS ၊ (၅၃)အထူးယာဉ် လိုင်းခရီးသည် တင်ယာဉ်သည် ကုလားကုန်း ကျေးရွာ၊ မိုင်တိုင်အမှတ်(၃၆/၃)အနီး အရောက် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ တစ်ဘက်ယာဉ်ကြောသို့ ရောက်ရှိကာ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ မောင်းနှင်လာသော N ---- ဟိုင်းလတ်အငှားယာဉ်အား ၀င်ရောက်တိုက်မိ ခဲ့ပြီး 1C ---- FUSO BUS
Posted: 06 Feb 2015 12:52 AM PST
ဓါတ်ပုံ - အင်တာနက် မန္တလေး- မူဆယ်လမ်း၊ (၁၆) မိုင် စစ်ဆေးရေးစခန်း (ကျောက်ချော) တွင် တရုတ် နိုင်ငံသို့ တင်ပို့မည့် တရားမ၀င် သယ်ဆောင် လာသော မြွေ (၂၂၈) ကောင်ကို ယမန်နေ့ က ဖမ်းဆီးရမိ ခဲ့ကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေကြီး အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာန ထံမှ သိရသည်။ လောလောဆယ် ယာဉ်မောင်းကို စစ်ဆေးနေ ပါတယ်။ သူကတော့ စဉ့်ကိုင်က သယ်လာတာ၊ ဘယ်ပို့ရမယ် ဆိုတာ မသိသေးဘူး၊ မူဆယ်ရောက်မှ ပို့ရမယ့် နေရာကို ဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်မယ်လို့
Posted: 06 Feb 2015 12:33 AM PST
တောတွင်းမှာ ကင်းလှည့်နေတဲ့ အစိုးရစစ်သားများ /photo: RFA/Moe Thu Aung မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ဒေသတွေမှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ အစိုးရတပ်တွေကြား ဒီသီတင်းပတ်အတွင်း တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန် လာခဲ့ရာမှာ နှစ်ဖက်အကျအဆုံး အနည်းဆုံး ၂ဝ ၀န်းကျင်ရှိမယ်လို့ ရိုက်တာသတင်းက ဖေါ်ပြပါတယ်။ အစိုးရ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အင်တာနက် Facebook စာမျက်နှာမှာတော့ တနင်္လာနေ့ က
Posted: 06 Feb 2015 12:31 AM PST
အစိုးရတပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း အစိုးရတပ် နဲ့ တီအန်အယ်လ်အေ တအာင်းပလောင်တပ်ဖွဲ့ကြား ဖြစ်ပွားတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ရွာသားတွေ သေဆုံးဒဏ်ရာရကြသလို ဘေးလွတ်ရာကို ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့ ရွာသားတွေ လည်း ထောင်ချီ ရှိနေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက် နဲ့ ၃ ရက်မှာ တိုက်ပွဲပြင်းထန်ပြီး စစ်တပ်က လေ ယာဉ်ပေါ်ကနေ ပစ်ချတဲ့ ကျည်ဆန်ကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင် ၁ ဦးနဲ့ ရွာသား ၁ ဦး သေဆုံြး
Posted: 06 Feb 2015 12:29 AM PST
Father Land ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးကျော်မြင့်၏ အမှုများစွာ အတွက် တဦးတယောက်ချင်းစီ တရားစွဲဆိုပါက မပြီးပြတ်နိုင် သောကြောင့် အထူးစုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနမှ (စစစ)စသုံးလုံးမှ တရားလိုပြုလုပ်၍ တရားစွဲပြီး နိုင်ငံတော်အဆင့် ကိုင်တွယ်သွားမည်ဟု စုံစမ်းသိရှိရသည်။ အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အထူးစုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနနှင့် နီးစပ်သူတဦးက“ဦးကျော်မြင့်အမှုက လိမ်လည်မှု ငွေပမာဏ အရမ်းများတော့ သမ္မတရုံး က လှမ်းမေးတယ်တဲ့။
၀ါရှင်တန် ၊ ၆-၂-၂၀၁၅ ၁၉၉ဝ ပြည့်လွန်နှစ်များ နောက်ပိုင်းတွင် ဆော်ဒီအာရေဗျ တော်ဝင် မိသားစုက ၄င်းတို့၏ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့အစည်း သို့ ငွေကြေး သန်းပေါင်း များစွာ ထောက်ပံ့ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု တွင် အကျဉ်းချ ခံနေရသည့် အယ်လ်ကိုင်ဒါ စစ်သွေးကြွ တစ်ဦးက ဖွင့်ဟ ပြောကြား ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ အသက် ၄၆ နှစ် အရွယ်ရှိ ပြင်သစ်လူမျိုး တရားခံ ဇာကရစ်မူဆာဝီ က အဆိုပါ ဖွင့်ဟ ပြောကြားချက်ကို ၂ဝဝ၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၁
Posted: 06 Feb 2015 12:28 AM PST
၀န်ကြီး ဦးဝင်းကိုကို ကျောင်းသားများကို ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးစဉ် ဧရာဝတီ သပိတ်စစ်ကြောင်း ရန်ကုန်ကို မချီတက်ဘဲ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး အတွင်းမှာသာ သပိတ်မှောက်ဖို့ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီး အချို့က သပိတ်စစ်ကြောင်း ညအိပ်တည်းခိုရာ နေရာကို မနေ့ညက လာရောက် ဆွေးနွေး ခဲ့ပါတယ်။ သပိတ်စစ်ကြောင်း ညအိပ်တည်းခိုရာ ပန်းတနော်မြို့ ညောင်ပင်သာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင်
Posted: 06 Feb 2015 12:24 AM PST
ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်နေ့က ဧရာဝတီ ကျောင်းသား သပိတ်စစ်ကြောင်း ပန်းတနော်မြို့ကို ချီတက်လာစဉ် / Photo: Kyaw Lwin Oo/RFA အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြနေ ကြတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေ ဖြတ်သွား မယ့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် ဆတ်သွားကျေးရွာမှာ ရဲဝန်ထမ်း ၂၀၀ လောက် ရောက် ရှိနေတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ အဲဒီ့ရဲဝန်ထမ်းတွေက ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက် က ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီး ရွာထဲမှာ
Posted: 06 Feb 2015 12:22 AM PST
အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတဲ့ ကျောင်း သားတွေ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့က ရေနံချောင်းမြို့ကနေ မကွေးမြို့ကို ချီတက်လာစဉ် / Photo: Hset Paing Toe/RFA ကျောင်းသားတွေရဲ့ သပိတ်မှောက်ဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သမ္မတရုံးက မနေ့ကရက်စွဲ နဲ့ ကြေညာချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာဆန္ဒတွေကို အစိုးရအဖွဲ့က လွှတ်တော်ကိုတင်ပြပြီး၊ ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်တာကို ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အြေ
Posted: 06 Feb 2015 12:46 AM PST
လွှတ်တော်တွင် အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းထား ခဲ့သော အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ ကျောင်းသားများ တောင်းဆို ထားသော အချက် (၁၁) ချက်အား လိုက်လျော ပေးခြင်း မရှိဘဲ အချိန်ဆွဲ နေသည့် အတွက် မုံရွာမြို့မှ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား (၂၀၀) ကျော် တို့သည် ယခုလ (၅) ရက် နေ့မှ စတင်ကာ သပိတ် စစ်ကြောင်းကို စတင် ဆင်နွှဲခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ သပိတ် စစ်ကြောင်းတွင် မုံရွာ တက္ကသိုလ်၊ မုံရွာ စီပွားရေး တက္ကသိုလ် နှင့် နည်းပညာ တက္ကသို
Posted: 06 Feb 2015 12:09 AM PST
သတင်းဓာတ်ပုံ – ဝေဖြိုး အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေပြင်ဆင်ရေး အတွက် ဆန္ဒပြနေတဲ့ ထားဝယ်သပိတ်မှောက် စစ်ကြောင်းဟာ မော်လမြိုင် ကျောင်းသားတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ရန်ကုန်ကို ချီတက်ကြမယ်လို့ ကျောင်းသားတွေက ပြောပါတယ်။ ထားဝယ် တကသ၊ အကသ ကျောင်းသူ ကျောင်းသား အင်အား ၅၀ ကျော်လောက်ပါဝင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး ထားဝယ်သပိတ်စစ်ကြောင်းဟာ ဒီနေ့ ထားဝယ်မြို့တွင်းမှာ လှည့်လည်ဆန္ဒပြ ခဲ့ပြီးနောက် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ရှေ့မှာ ဟေြာေ
Posted: 06 Feb 2015 12:05 AM PST
ကျောင်းသား ဆန္ဒပြပွဲတွေ ရှိနေပေမယ့် တက္ကသိုလ်နဲ့ အခြေခံ ပညာကျောင်း တွေမှာ ကျင်းပမယ့် စာမေးပွဲတွေကို အချိန်စာရင်း ထုတ်ပြန် ကြေညာထားတဲ့ အတိုင်း မပျက်မကွက် စစ်ဆေးသွားမယ်လို့ ပညာရေးဝန်ကြီး ဌာနက ထုတ်ပြန်ကြေညာ လိုက်ပါတယ်။ အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေကို ဆန္ဒပြမှုတွေ ရှိနေတဲ့ အတွက် ပြည်သူတွေက ကျောင်းသားတွေရဲ့ စာမေးပွဲတွေအတွက် စိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်း၊ မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ ရင်သွေး ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ အေးချမ်းစွာ
Posted: 05 Feb 2015 07:06 PM PST
အကြမ်းဖက်သမားဟာ ဘာသာတိုင်း၊ လူမျိုးတိုင်း၊ ၀ါဒတိုင်းမှာ ရှိနိုင်တာမို့ အကြမ်း ဖက်သမားကို အကြမ်းဖက် သမားလို့ပဲ သုံးစွဲသင့်တယ်၊ အကြမ်းဖက်သမားနဲ့ ဘာသာရေး၊ အကြမ်းဖက်သမားနဲ့အယူဝါဒ ဆိုတဲ့ စကား လုံးတွေ တွဲမသုံးသင့်ဘူး . . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီမြို့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာ အကြမ်းဖက်မှုတွေကို ဘယ်လိုပူးပေါင်း ကာကွယ်တား ဆီးမလဲ၊ ဘာ
Posted: 05 Feb 2015 06:15 PM PST
IS ဖမ်းဆီး သတ်ဖြတ်ခံရတဲ့ ဂျော်ဒန် လေယာဉ်မှူး ဂျော်ဒန် စစ်လေယာဉ် တွေက ဆီးရီးယားက အစ္စလာမ္မစ် နိုင်ငံတပ် ပစ်မှတ် တွေကို လေကြောင်း တိုက်ခိုက်မှု အကြိမ် အတော် များများ ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။ IS တပ်ဖွဲ့ရဲ့ လက်နက် တိုက်တွေ၊ လေ့ကျင့်ရေး စခန်း တွေနဲ့ ပုန်းအောင်း တဲ့ နေရာ တွေကို ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက် ခဲ့တယ်လို့ ဂျော်ဒန် အစိုးရ က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒါဟာ IS က ဖမ်းဆီး ထားတဲ့ ဂျော်ဒန် လေယာဉ်မှူး ကို ရက်ရက် စက်စက် သတ်ြ
Posted: 05 Feb 2015 06:13 PM PST
ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးအထူး ကိုယ်စားလှယ် ရန်ဟီလီရဲ့ မြန်မာခရီးစဉ်အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်က ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ အခြေအနေနဲ့ မျိုးစောင့်ဥပဒေ ကိစ္စ မြေသိမ်းယာသိမ်းမှု အကြောင်းစတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေကို ထောက်ပြသွားတဲ့အပေါ် မြန်မာအစိုးရက ဒါဟာ ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်စွက်ဖက်တာလို့ အပြင်းအထန် တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ အခြေအနေကို သူ့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေအတိုင်း ဆ
Posted: 05 Feb 2015 06:10 PM PST
ကချင်ပြည်နယ်တွင်း ဖြစ်ပွါးနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေသူတွေ ကို ဘေးလွတ်ရာ ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ပေးဖို့နဲ့ လူသားချင်းစာနာမှု ဆိုင်ရာ အကူအညီတွေ ပေးခွင့်ရဖို့ စစ်တပ်နဲ့ ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကို ကုလသမဂ္ဂက ပန်ကြားလိုက်ပါတယ်။ ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ်မှာ ဒီနှစ်ဆန်း ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် စတင်ပြီး ဖြစ်ပွါးခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြား ရောက်နေတဲ့ ဒေသခံတွေအတွက် အထူး စိုးရိမ်စိတ်ပူကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာ
Posted: 05 Feb 2015 12:29 PM PST
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ မူစလင်ကျေးရွာတွင်း လူဦးရေ စာရင်းကောက်ယူနေစဉ်။ (မတ် ၃၁၊ ၂၀၁၄) ရခိုင်ပြည်နယ် အတွင်းမှာ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားထုတ်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ကို နိုင်ငံတော် အဆင့် စီမံကိန်းတွေ ထားပြီး ဆောင်ရွက်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ် က ပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် ယာယီ နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင် ကိုင်ဆောင်ထားသူတွေ အနေနဲ့ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးမှာပဲ ပုံမှန် လုပ်ငန်းစဉ်တွေ နဲ့သာ လျှော
Posted: 05 Feb 2015 12:24 PM PST
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ လူမဆန်တဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ မတရား အလုပ် ခိုင်းစေခံနေရတဲ့ ရာနဲ့ချီတဲ့ ကလေးလုပ်သားတွေကို နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း စက်ရုံတွေကနေ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ အိန္ဒိယ ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ သရေ စက်ရုံတွေနဲ့ ပလတ်စတစ် စက်ရုံတွေကို ရဲတပ်ဖွဲ့က စီးနင်း ရှာဖွေမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ရာမှာ ၁၀ ရက်အတွင်း ကလေးလုပ်သား ၃၅၀ ကျော်ကို ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီ ကလေးတွေဟာ ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ ဆိုးရွားတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အလုပ်လု